भारतमा ५ करोडको इन्स्योरेन्स गराएर के गरिँदैछ नेपालीमाथि ? | Ratopati
बैङ्किङ फ्रड कि नेपाली मारेर इन्स्योरेन्स क्लेमको योजना ?
personमदन ढुङ्गाना exploreकाठमाडौं access_timeअसोज २३, २०७५ chat_bubble_outline0
दलालहरूले उनको जन्ममिति १९६५ जुन २६ बनाएका छन् । जन्ममिति अनुसार उनी यतिबेला ५३ वर्षका भए । तर उनलाई खासमा बैङ्कमा खाता खोल्ने र त्यसबाट ऋण निकाल्ने भनिएको रहेछ । भारतीय
ठेगाना र भारतीयकै नाममा बैङ्क खाता खोल्ने भएकाले केही समस्या नपर्ने पनि उनलाई आश्वस्त पारिएको छ ।
‘खासमा खाता खोल्नेबित्तिकै ऋण निकाल्न नमिल्ने रहेछ । त्यही भएर पहिले कागजात बनाएर खाता मात्रै खोलेको र अहिले ऋण लिएको रहेछ ।’ प्रल्हादले रातोपाटीसँग भने ।
खासमा यो खाता बैङ्किङ प्रयोजनका लागि मात्रै भन्दा पनि इन्सुरेन्स गर्ने नियतका साथ खोलिएको बुझ्न सकिन्छ । दलालले बैङ्कबाट ऋण लिने प्रयोजनका लागि भने पनि ५० कटिसेकका व्यक्तिको पनि बैङ्कमा खाता खोल्नुको कारण रहस्यमय छ । बैङ्कमा खाता खोलेपछि इन्स्योरेन्स गर्न सजिलो हुने भएकाले प्रतिव्यक्ति करिब ५ करोडको इन्स्योरेन्स पोलिसी बनाइएको छ । यसले बैङ्किङ फ्रड मात्रै भन्दा पनि अरू ठूलै योजना र दुर्घटनाको सङ्केत गरिरहेको छ ।